Job 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 Elifaz+ onye Timan wee zaa ya, sị: 2 “Ọ bụrụ na mmadụ anwaa ịgwa gị okwu, ike ọ̀ ga-agwụ gị?Ma, ònye nwere ike igbochi mmadụ ikwu okwu? 3 Lee! Ị gbaziwo ọtụtụ ndị,+Ị na-emebukwa ka aka ndị na-adịghị ike dị ike.+ 4 Okwu gị na-eme ka onye ọ bụla sụrụ ngọngọ bilie;+Ị na-emekwa ka ikpere na-adịghị ike sie ike.+ 5 Ma ugbu a, ọ bịarala gị, ike wee gwụ gị;O meela gị, i wee na-echegbu onwe gị. 6 Ọ́ bụghị nsọpụrụ ị na-enye Chineke bụ obi ike gị?Ọ́ bụghị iguzosi ike n’ihe+ n’ụzọ gị bụ olileanya gị? 7 Biko, cheta: Olee onye aka ya dị ọcha nke latụworo n’iyi?Olee ebe e kpochapụtụrụla ndị ezi omume?+ 8 Dị ka m hụworo, ndị na-echepụta ihe ọjọọNa ndị na-agha nsogbu dị ka mkpụrụ, ọ bụ ha ga-aghọrọ ya.+ 9 Ha na-ala n’iyi site n’ume Chineke kupụrụ,Ha na-anwụkwa site ná mwụpụ nke iwe ya. 10 Ọdụm na-ebigbọ, a na-anụkwa olu nwa ọdụm,Ma a na-agbaji ezé ụmụ ọdụm tojuru etoju. 11 Ọdụm na-ala n’iyi n’ihi na o nweghị anụ ọ dọgbutere,Ụmụ ya na-ahapụkwa ibe ha gbasasịa. 12 A takwunyeere m okwu,Ntị m wee nụpere ya,+ 13 Mgbe obi na-ezughị m ike n’ihi ọhụụ m na-ahụ n’abalị,Mgbe oké ụra ji ndị mmadụ. 14 Ụjọ jidere m, m makwara jijiji,O mekwara ka ọkpụkpụ m niile jupụta n’ụjọ. 15 Otu mmụọ wee gafere n’ihu m;Ajị dị m n’ahụ́ wee guzoro ọtọ. 16 Ọ kwụụrụ ọtọ ma nọrọ jii,Ma amataghị m ihe ọ bụ;E nwere ihe guzo n’ihu m;Ebe niile dara jụụ, m wee nụ otu olu: 17 ‘Mmadụ efu—ò nwere ike ịbụ onye ezi omume karịa Chineke?Ka mmadụ ò nwere ike ịdị ọcha karịa Onye mere ya?’ 18 Lee! Ọ tụkwasịghị ndị ohu ya obi,Ọ na-ebokwa ndị ozi ya ebubo na ha na-emejọ, 19 Ma ya fọdụzie ndị bi n’ụlọ ájá,Ndị a tọrọ ntọala ha n’ájá!+A na-azọpịa ha ọsọ ọsọ karịa nla. 20 Malite n’ụtụtụ ruo n’anyasị, a na-azọpịa ha;Ha na-ala n’iyi ruo mgbe ebighị ebi n’enweghị onye ọ na-emetụ n’obi. 21 Ọ̀ bụ na e fopụghị ụdọ ụlọikwuu ha?Ha na-anwụ n’ihi enweghị amamihe.